စမတ် လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > စမတ် လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
စမတ် လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator
AOX-R ကို ကို စီးရီး စမတ် လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် အသစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဘို့ တစ်ဦး လွှဲ တစ်ဦးngle rတစ်ဦးngတွင်g အကြား 90Â° နှင့် 270Â°, ထိုကဲ့သို့သော တစ်ဦးs လိပ်ပြာ vတစ်ဦးlves, bတစ်ဦးll vတစ်ဦးlves.Sတွင်ce 1997, AOX hတစ်ဦးs mတစ်ဦးde တိုင်း efဘို့t သို့ ပို့ အဆိုပါ အမြင့်ဆုံး quတစ်ဦးlity AOX-R ကို ကို စီးရီး စမတ် လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r နှင့် န်ဆောင်မှုများ ဘို့ ကျွန်တော်တို့၏ cusသို့mers.Through တွင်novတစ်ဦးtive mတစ်ဦးnတစ်ဦးgement, နည်းပညာ တိုးတက်ရေး နှင့် humတစ်ဦးn resကျွန်တော်တို့၏ces mတစ်ဦးnတစ်ဦးgement, ကျွန်တော်တို့ လိမ့်မည် ကြိုးစား သို့ leတစ်ဦးd နှင့် မြှင့်တင်ရန် အဆိုပါ တိုးတက်ရေး ၏ အဆိုပါ တွင်dustry.We တစ်ဦးre မျှော်လင့် ဖြစ်လာသည် yကျွန်တော်တို့၏ ရှည်လျားသော သက်တမ်း pတစ်ဦးrtner တွင် Chတွင်တစ်ဦး.
1. ခိုင်မြဲသောချေးယဉ်အိမ်ယာ: AOX-R ကိုစီးရီးစမတ်သုံးလပတ်၏ shell ကိုလျှပ်စစ် actuator turn anodic ဓာတ်တိုးကုသမှုနှင့် polyester အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူ, လူမီနီယံအလွိုင်း၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ IP68 optional ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်ခိုင်မာတဲ့ချေး-ခံနိုင်ရည်နှင့်ဝင်း IP67, NEMA4နဲ့6ဖြစ်ပါတယ်။
2. လွယ်ကူ cams set: AOX-R ကိုစီးရီးစမတ်သုံးလပတ်၏အီလက်ထရောနစ်န့်သတ်ချက် switch ကိုလျှပ်စစ် actuator turn cam.The အနေအထားကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အထူး tool ကိုမပါဘဲတိကျစွာနှင့်အဆင်ပြေသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
3. စက် Self-သော့ခတ်: တိကျမှန်ကန်သောတီကောင်နှင့်ပိုးဂီယာလွှဲပြောင်း Self-သော့ခတ်နှင့်အတူကြီးမားတဲ့လိမ်အားမြင့်မားထိရောက်မှု, ပြောင်းပြန်လှန်တားဆီး။
AOX-R ကိုစီးရီးစမတ်သုံးလပတ်များ၏မှန်မျက်နှာပြင်လျှပ်စစ် actuator တစ်ခုံးမှန်ဘီလူးချမှတ်လှည့်ကို၎င်း, ရေနုတ်မြောင်းဆိပ်ကမ်းကိုရေစုဆောင်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး, နှင့်စောငျ့ရှောကျဖို့ပိုအဆင်ပြေသည်, အလွယ်တကူပျက်စီးမထားပြင်ပသတ္တုပစ္စည်းများ၏လုပ်သောတစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်အဆို့ရှင်အဖွင့်အရိပ်အယောင်ရှိသည်။
1997 ခုနှစ်မှစ. ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနည်းပညာ R & D စင်တာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည် R & D ကိုဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်အရင်းအမြစ်များအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံ, High-နည်းပညာအခွက်ကောလိပ်များနှင့်သုတေသနဌာနတို့အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, အဆင့်မြင့်ကိရိယာများကိုမိတ်ဆက်မိတ်ဆက်, etc.We ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုအာရုံစိုက်ဖို့ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်လိမ့်မယ် အမြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးမြင့်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မား AOX-R ကိုစီးရီးစမတ်သုံးလပတ်လျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်ဦးဆောင်လမ်းပြ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ, ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို IS09001, ISO14001, အီး, ATEX, gost, EAC, SIL3, IP68, Cu-TR, ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်-အထောက်အထားအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်ရရှိသောအပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အပြည့်အဝကိုနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းပြသရာဖြစ်ပါတယ် နှင့် AOX-R ကိုစီးရီးစမတ်သုံးလပတ်၏အရည်အသွေးလျှပ်စစ် actuator လှည့်။
မေး: လျှပ်စစ် actuator turn qualityof AOX-R ကိုစီးရီးစမတ်သုံးလပတ်ထိန်းချုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
မေး: ဘယ်လောက်ကြာငါ AOX-R ကိုစီးရီးစမတ်သုံးလပတ်၏နမူနာလျှပ်စစ် actuator ကိုဖွင့်ရဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်သလဲ
hot Tags:: စမတ် လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်